Ngaba unokuncoma i-good Amazon listing tool to manage my inventories?
Ukubonelela ngemveliso eyaneleyo kubathengi bakho abangabalulekanga kubaluleke nakakhulu kwi-intanethi ye-drop shipping shipping you can think. Yintoni ephawulekayo ngakumbi - eneneni, kungcono ungayizizikhukhumeli ngokufumana umfanekiso wakho wemveliso ugalelwe "ithengiselwano". Ndiyathetha ukuba akufanele wenze ukuba abathengi bakho balinde ukuhlengahlengiswa kwakho - wonke umculi kufuneka ahlale enikwa ngokukhawuleza ngendlela yokulawula i-inventory yakho ngokuchanekileyo. Nanku lixesha lokuba ukhethe i-right listing tool Amazon - kwaye uzuze ekusebenzeni ngokufanelekileyo ulawulo lwempahla ukuze isitolo sakho sokuthutha i-intanethi sibe nzuzo ngakumbi. Intengiso nganye ye-Amazon ehlongozwe ngezantsi yenzelwe i-marketplace ekhokelayo ye-intanethi-kwaye mna ndavavanya bonke, nje ngenxa yokuphelela. Ngoko, qhubeka ufunda kwaye uzive ukhululekile ukukhetha isisombululo esiphezulu esifanelekileyo sokuphathwa kwempahla esichazela iimfuno kunye neenjongo zakho - server parts san jose.
Okokuqala kwaye mhlawumbi ithuluzi lokubonisa i-Amazon elinokuguquguqukayo, i-Sellics ihamba nomgca wezinto ezintle kwaye kulula ukuyisebenzisa, abathengisi beevavisi. Phakathi kwamanye amanqanaba anqabileyo kweli qeshana, kukho ukubeka iliso lokwenene kwenkxaso efumanekayo kunye neNzuzo yeDashboard, ukulungiswa kwemikhankaso elula kunye neendleko zokuthengisa ukunciphisa nge-PPC Manager. Ungasebenzisa kwakhona i-Sellics ukulandelela kunye nokwandisa uluhlu lwakho lwemveliso ngoncedo lophando olunzulu olufumanekayo kwi-rankings yegama elingundoqo, uhlalutyo lokuncintisana kunye nokuhlaziywa komkhiqizo.
Isixhobo esilandelayo esinokubaluleka se-Amazon esinokubaluleka ukuba sihambe ngeLabitch Labs. Esi sikhokelo esisodwa sisebenza ngokubanzi kunye nemisebenzi yamaninzi, ukunyusa inzuzo ngokwendlela yokuzenzekelayo, ukuhlengahlengisa kunye nokuphambili. Ngokucacileyo, le software inganika umthengisi e-Amazon eneenkcukacha ezicacileyo, ezinzulu ezifunekayo ekukhuleni okwenziwe ngokukhawuleza kunye nokunyusa inzuzo. Ivumela abathengisi ukuba benze izigqibo ezingcono ezithuthukisa abathemba abathengi ngexesha elifanayo. Phakathi kwezinye izinto ezibonakalayo eziza kule ncwadana yezixhobo ze-Amazon, ndifumene ingqiqo ekhuphisanayo yokunciphisa i-intanethi engcono, ulawulo oluqinileyo malunga neengozi zokusebenza, ukubikezela ngokuchanekileyo kunye nocwangciso lwehlabathi.
Le sixhobo esiyi-smart inventory yisisombululo esihle kakhulu sokugcina umkhondo woluhlu olulindelekileyo, ukudala uluhlu lweemveliso ezikhuphisanayo, kunye fumana inkxaso kunye neengcebiso ezifikeleleko ezibonisa iingcebiso kunye nezenzo ezifanelekileyo ukuba zithathwe kwi-chain-chain maintenance yakho (umzekelo, xa uphinde ulungise imveliso kunye naluphi ubungakanani obufunekayo).
I-Ecomdash ngowokugqibela i-Amazon isixhobo esinokufuna ukukubonisa namhlanje. Yaye ukuba uthengisa kwiindlela ezininzi, isofthiwe yokulawula i-inventory iyakuba ngumkhethe wakho wokubulala ngaphandle. I-Ecomdash isebenza nje ngokulula - ingasetyenziselwa ukudibanisa iimpahla zakho kunye nezihlomelo. Ndiyathetha ukuba ungadonsa ngokulula yonke into efunekayo yedata kuzo zonke izixhobo zakho zokuthengisa - njengeemfuno zokuthumela, i-oda yokuthengisa, njalo njalo-ukuba zonke zibekwe ngendlela efikeleleke kwaye ifumaneke kakuhle. Ngendlela yokuvumelanisa idatha efumanekayo ngexesha langempela, unako ukunika ukunyusa okulinganiselweyo kwishishini lakho, kwaye uqale ukuthengisa iimveliso ezingakumbi ngeqela leziteshi - ngokulula nangokulula.